Home Wararka Majaajiliistihii caanka ahaa Cabdi Muridi (Ajakis) oo maanta geeriyooday
Majaajiliistihii caanka ahaa Cabdi Muridi (Ajakis) oo maanta geeriyooday
Allaha u naxariistee waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ku geeriyooday majaajiliistihii caanka ahaa ee Cabdi Muridi Dheere (Ajakis), kaas oo maalmihii dambe ku xanuunsanayey gudaha caasimada. Geerida ku timid marxuumka ayaa waxaa warbaahinta u xaqiijiyey qaar ka mid ah ehelladiisa iyo bahda TV-ga Universal oo uu uu la shaqeynayey Ajakis.
“Allaha unaxariisto, majaajiliiste Cabdi Muridi Dheere (Ajakis) oo ka mid ahaa hawl-wadeenada Tv-ga Universal oo goordhaw ku geeriyooday Muqdisho,” ayaa lagu yiri wr qoraal ah oo ka soo baxay maamulka Telefishinka caalamiga ah ee Universal.
Sidoo kale Cabdi Muridi Dheere (Ajakis) ayaa saddexdii maalin ee la soo dhaafay ku jiray mid ka mid ah Isbitaalada ku yaalla Muqdisho ,halkaas oo lagu la tacaalayey xaaladdiisa caafimaad, kadib xanuun deg deg ah oo ku soo booday, xilli uu ku sugnaa xaafadiisa.
Marxuumka ayaa caan ku ahaa majaajilada, isaga oo qaban jiray barnaamijyo toos ah oo madadaalo ah iyo sidoo kalena wuxuu aad ugu wanaagsanaa jilida ruwaayadaha. Geeridiisa waxaa ka tacsiyeeyey qeybaha kala duwan ee Fanka Soomaamliyeed iyo sidoo kale madaxda wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya.